को IČO बजारमा कसरी परिवर्तन हुनेछ 2018? - Blockchain समाचार
2017 ICOs संख्या मा विस्फोटक वृद्धि देखे, लगानी आकर्षित गर्न एक क्रांतिकारी तरिका रूपमा. यो वर्ष 234 IČO परियोजनाहरू भन्दा बढी उठाएको छ $3.7 अरब, को कुल लगानीको सबैभन्दा धेरै भाग संग मई देखि अक्टोबर आकर्षित भइरहेको, Coinschedule अनुसार. विशेषज्ञहरु कि अर्को वर्ष विश्वास, तथापि, यो प्रवृत्ति अस्वीकार गर्नेछ र IČO बजार एक महत्वपूर्ण कमी र पुनर्गठन सामना गर्नेछ.
जेरी Brito अनुसार, यस गैर-नाफामुखी संगठनको सिक्का-केन्द्र को कार्यकारी निर्देशक, सरकारको टोकन बिक्री नियन्त्रण वृद्धि हुनेछ. यस वर्ष अमेरिकी जमानत र विनिमय आयोग (सेकेन्ड) भर्चुअल सिक्का वा टोकन प्रस्ताव वा बेचिन्छ जमानत हुन सक्छ भने. यदि तिनीहरूले जमानत हो, प्रस्ताव र एक IČO यी भर्चुअल सिक्का वा टोकन को बिक्री संघीय जमानत व्यवस्था गर्न विषय हो. यस सन्दर्भमा, को सेकेन्ड धेरै IČO आयोजकहरु विरुद्ध कानून संग घोटाला र गैर-अनुपालन को शुल्क दायर. Brito अन्य देशहरूमा सोच्छ, जो विरोधी-घोटाला उपाय लिन जाँदैछन्, अमेरिकी उदाहरण पछ्याउने.
लागि टोकन बिक्री सेकेन्ड नियम पालन गर्न आवश्यकता, लगानीकर्ताले संग संयुक्त’ ठूलो भरोसा लागि इच्छा, नयाँ प्रवृत्ति नेतृत्व हुन सक्छ. मा 2018, तिनीहरूले बेच्न अनुमति हुनुहुन्छ अघि हामी राम्रो टोकन योग्य नयाँ टोकन को भेटी लागि मञ्चहरूमा को उद्भव देख्नुहुने, र लगानीकर्ताले तिनीहरूलाई बारेमा राम्रो इन्साफ बनाउन मदत गर्नेछ.
Brito कि सुरुमा भविष्यवाणी, यी मञ्चहरूमा मात्र मान्यता प्राप्त लगानीकर्ताले खुला हुनेछ.
त्यसैले, उद्योग professionalizes रूपमा, हामी IČO बबल फुट्छ छ कि बुझ्ने सक्छ. वास्तबमा, एक मंदी त्यहाँ बस कम ठगी हो भनेर संकेत गर्छ हुनेछ. नयाँ कोष मोडेल रूपमा, ICOs रहन यहाँ.
Oliver Bussmann, संस्थापक र प्रबन्ध साझेदार Bussmann सल्लाहकार मा, स्विस वित्तीय पकड UBS मा छैन-लागि-लाभ गुप्त उपत्यका संघ र पूर्व समूह CIO को अध्यक्ष र प्रबन्ध निर्देशक, दृढ विश्वास गर्दछन् ICOs को दुनिया मा थप परिपक्व हुनेछ भन्ने 2018 बढी परम्परागत खेलाडीहरू मुछिन. फलस्वरूप, तिनीहरूले नयाँ बजार विकास गर्न आफ्नो आईपीओ अनुभव र विशेषज्ञता लगानी हुनेछ र सारा व्यापार आकर्षित निवेश को एक राम्रो संरचित र थप व्यावसायिक मोडेल लीन हुनेछ.
अर्को 12-18 महिना भन्दा बढी, म त्यहाँ IČO गरेको विशेषताहरु हुनेछ आशा, यस्तो पुस्तक भवन रूपमा, मूल्य निर्धारण, सुरुवातमा मूल्यांकन, र यति मा. हामी पहिले देखि नै हेर्न थालेका छौं रूपमा, यो केवल सेतो कागज को पछाडि कोष प्राप्त गर्न कठिन हुनेछ. लगानीकर्ताले ध्वनि व्यापार योजना र पारदर्शिता उच्च स्तर माग हुनेछ.
लहर मा प्राविधिक विभाग को टाउको, Stephan थोमस माथिको तर्क संग सहमत, Quora मा आफ्नो पोस्ट अनुसार (ज्ञान साझेदारी को सामाजिक मंच). उहाँले आज IČO लहर र को altcoin लहर बीच समानताहरु धेरै देख्नुहुन्छ 2014. यस सन्दर्भमा, प्रारम्भिक प्रचार बढि व्यावहारिक र सन्तुलित IČO तरिका दिनेछु; धेरै ICOs लगानी आकर्षित गर्न आफ्नो दृष्टिकोण परिवर्तन हुनेछ. मार्क Lurie पनि अर्को वर्ष त्यहाँ धेरै बढी संस्थागत उच्चतम गुणस्तर परियोजनाहरूमा सबै जानेछ राजधानी हुनेछ भन्ने विश्वास गर्छ.
त्यहाँ ICOs मा एक shakeout र गुणस्तर एक उडान हुनेछ. त्यहाँ ICOs एक proliferation केही बस्ट जाने कहाँ हुनेछ. त्यहाँ धेरै बढी संस्थागत उच्चतम गुणस्तर परियोजनाहरूमा सबै जानेछ राजधानी हुनेछ. त्यो उद्यम राजधानी र विकास इक्विटी राउंड्स संग वित्तीय संकट समयमा भयो के, धेरै. सबैभन्दा कम्पनीहरु कुनै पनि रकम उठाउन सकेन, तर धन उठाउनु सक्ने ती साँच्चै उच्च मूल्यांकन मा यो गरे.
मा 2018, ICOs र Bitcoin-सम्बन्धित उत्पादनहरु बनाउन कम्पनीहरु को भाग मा smartest कदम सार्वजनिक र मिडिया को बन्द wean हुनेछ “डिजिटल नगद” अवधारणा, तार युक्त रिपोर्ट रूपमा. यसलाई अब अर्थमा बनाउँछ कि एक रूपक हो, र यो पैसा जस्तै देखिन्छ कि नयाँ प्रविधिको हाम्रो उचित समझ को बाटो छैन प्राप्त तर साँच्चै गर्नुपर्छ छ. तर IČO सहभागीहरू उद्योग को छवि परिवर्तन गर्न भारी प्रयासमा बनाउन हुनेछ. विलियम Mougayar, एक चिरपरिचित क्यानाडा निवेशक, उद्यमी, र धेरै blockchain पुस्तकहरू लेखक, हालको IČO बजार र टोकन गलत खेलाडीहरू आकर्षित भनी उल्लेख.
मात्र टोकन छ 1.0 परियोजनाहरूको गलत प्रकार आकर्षित, तर यो पनि एक मुद्रा कताई देखि अवसरवादी लाभ हेर्न मानिसहरू को गलत प्रकार आकर्षित छ, भीड देखि हुर्काउन र चन्द्र प्रतिज्ञा गर्नुभएको, सानो उत्तरदायित्व संग विरुद्ध आयोजित गर्न. पहिलो र मुख्य, हामी जानुभए र blockchain आधारभूत नवाचारै लागू गर्नुपर्छ. त्यसपछि हामी critically टोकन कार्यक्षमता मूल्याङकन गर्न आवश्यक, टोकन क्षमताहरु भन्दा-ईन्जिनियरिङ् बिना. हामी समीकरण मा फिर्ता blockchain राख्नुपर्छ, र टोकन.
Vitalik Buterin साथै टोकन को एक नयाँ तरिका बारे भन्छन्. उहाँले निश्चित छ कि 2018-2019 टोकन एउटा नयाँ प्रकारको, IČO 2.0, पाको IČO बजार देखिने.
त्यहाँ केही राम्रो विचार हो, त्यहाँ डरलाग्दो विचार धेरै छन्, र त्यहाँ धेरै धेरै छन्, धेरै खराब विचार, र एकदम केहि ठगी साथै. म टोकन आशा 2.0 र कुराको प्रकार कि मान्छे मा निर्माण सुरु हुनेछ 2018 र 2019 हुनेछ, सामन्यतया, पर्याप्त उच्च गुणवत्ता को हुन. विशेष गरी हामी टोकन को पहिलो लहर को नतिजा मध्यम-को अब अवधि छन् के देखेर सुरु भएपछि.
शीर्ष3Altcoins @ The Bitcoin ...
हे Altcoin दैनिक टोली, In thi...
अघिल्लो पोस्ट:Blockchain समाचार जनवरी72018
अर्को पोस्ट:IČO बारेमा: कसले टोकन बिक्री समयमा सबैभन्दा धन संकलन